Sida loo dheeho gadhkaaga - Talooyin ku saabsan Ragga Stylish | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, nololeedka, fashion
Dheehinta gadhka waa xaqiiqo la soo dhaqmi jiray sannado badan iyo in markasta oo ay si aad ah uga dabaqayso bulshooyinka oo dhan. Waxaa jira rag jecel inay xiraan gadhka, laakiin mararka qaar waxay muujiyaan in muuqaalkiisa, midabkiisa ama tayadiisu ka baxsan tahay timaha iyo wajiga intiisa kale. Waa in la ogaadaa in ay noqoneeyso dhaqan caam ah oo Waa hab lagu mideeyo tiradaas iyo muuqaalkaas sawirkaaga intiisa kale.
Waa inaad xusuusnaataa xaqiiqda rinjiyeynta garka inay tahay qiyaas guud oo ay adeegsadaan ragga 55% iyo in markasta oo aan haysanno badeecooyin kala duwan oo aan ku haysanno suuqa. Waxaa jira timajarayaal kaa caawin doona inaad doorato codka saxda ah, xitaa talooyinka haweenku waxay noqon karaan kuwa ugu saxsan.
1 Sida loo dheeho gadhkaaga
2 Garkaaga ku dheeh guriga
3 Talaabo talaabo ah inaad naftaada ugu dheehdo gurigaaga:
4 Midabyo semi-joogto ah
5 Tag xarun gaar ah
Xaqiiqdii muuqaalkaagu wuxuu ka yimid asal ahaan iyo dabiici ahaan, Haddana garkaagu wuxuu umuuqdaa mid cirro leh, ama waxaad tahay bunni garkaaguna wuxuu u muuqdaa mid cad, ama timo casaan ah iyo gadh cad ... taas oo ka dhigaysa indhaha oo dhami inay fiiro gaar ah u yeeshaan faahfaahintaas oo aadan jeclayn
Waxaad go'aansatay inaad gadato gadhkaaga, laakiin ma garanaysid meel aad u jeedsatid iyo sida loo sameeyo. Waxaa jira laba siyaabood oo lagu dheehan karo gadhkaaga, mid waa guriga adoo wata shey aad soo iibsaneysoama aadayso xarun khaas ahs oo ku gelinaysa daryeelka gacmo-yaqaanno.
Garkaaga ku dheeh guriga
Haddii aadan jeclayn inaad aado xarumo khaas ah ama aadan haysan mid kuu dhow, marwalba waxaad ku isticmaali kartaa howshan gurigaaga gudihiisa. Waxaad u baahan doontaa oo keliya qalabka ku jira gudaha sanduuqa dheeha iyo gadhka oo dhererkiisu yahay ugu yaraan 2,5 cm.
Markaad dooranayso dheeh waa inaad ka mid tahay sdooro mid u dhigma midabka timahaaga iskuna day inaad ku iibsato mid takhasus u leh timaha noocan ah. Ha isku dayin inaad doorato noocyo kale oo dheeh ah oo ku takhasusay timaha madaxa, way xanaaqsan karaan, maaddaama sheyga loo tilmaamay aaggan oo aan loogu talagalay wejiga. Waxaa jira dukaamo badan ama dukaamo waaweyn oo horeyba u lahaa alaabtan, ama internetka, oo leh noocyo iyo noocyo kala duwan oo kala duwan.
Talaabo talaabo ah inaad naftaada ugu dheehdo gurigaaga:
Kahor intaadan bilaabin iskuday inaad sameyso tijaabo xasaasiyad yar ka hor intaanad ku dhejin gadhka. Tan awgeed waa inaad mari wax yar oo ah aagga maqaarka oo aan muuqan. Codso badeecada oo sug ugu yaraan hal habeen si aad u aragto haddii maqaarkaaga uu wax uga qabanayo xasaasiyad suuragal ah Haddii uusan jirin wax isbeddel ah waad sii wadi kartaa adeegsiga.
Dhaq gadhka. Timaha waa inay nadiif ahaadaan ka hor inta aan la isticmaalin sheyga. Hubso inaad si fiican u maydheen shaamboo kasta oo hadhay oo gebi ahaanba garkaaga qallaji. Ha isticmaalin wax qaboojiye ah.
Diyaarso sheyga oo codso. Diyaarso dhammaan xirmooyinka ka hor intaadan ku dhaqaaqin dheehidda. Xidho gacno gashi si aad isaga ilaaliso in wasakhda wax soo saarka ah ay ku dhacdo gacmahaaga. Isticmaal codsadaha si aad ugu qaybiso badeecada timaha dhexdooda. Haddii aadan haysan codsade, waxaad ka fekeri kartaa inaad isticmaasho caday ama burush yar oo la mid ah. Ku dhaji badeecada dhaqdhaqaaqa jihooyinka kor ilaa hoos oo hubi inaadan ka tagin aag muuqda.
Sug dheehu inuu dhaqan galo: akhri tilmaamaha si aad u ogaato waqtiga ay qaadanayso in la dhaqan geliyo, badanaa waxay ku shaqeysaa qiyaastii 20 daqiiqo. Waxa jira gadhyo aad u madow oo u baahan codsi labaad si dheehu u dhaqan galo.
Biyo ku saar badeecada: Haddii aad u maleyneyso inaad horeyba u gaadhay codka saxda ah, waa inaad dheeha ku saartaa biyo, illaa aad ka aragto inay biyuhu ka soo baxayaan iyagoo nadiif ah.
Dhaq gadhkaaga. Isticmaal shaambo si aad u dhaqdid garkaaga una qallajiso taxadar gaar ah, maxaa yeelay tuwaalka waxaa laga yaabaa inuu yeesho nabarro qaarkood. Tan waxaad ku dhamayn doontaa dheehaaga iyo waa inaad ilaalisaa natiijooyinkeeda.
Midabyo semi-joogto ah
Badanaa waxay ku yimaadaan qaab shaambo ah. Alaabtaan waxaa loo isticmaalaa in lagu midabeeyo meelaha la doonayo.
Isticmaalkeedu wuxuu lamid yahay dheeha kale. Waa inaad ku dalbataa gadhka qalalan oo aad sugtaa ugu yaraan 5 daqiiqo midabada fudud, ama ugu badnaan 20 daqiiqo midab badan oo la caddeeyay. Saamayntiisu waxay socon kartaa 5 ilaa 6 maydhasho.
Tag xarun gaar ah
Haddii sheygaagu uusan kudareynin garkaaga guriga oo aadan dareemin inaad karti u leedahay inaad siiso natiijo wanaagsan, waxaad had iyo jeer naftaada gelin kartaa gacanta xirfadlayaal.
Waa mid ka mid ah soo jeedimaha ugu fiican, waxay tilmaamayaan wax soo saarka ugu fiican ee aad u baahan tahay, midabka ku habboon iyo midka ugu habboon qaabkaaga. Adigoon ka maqnayn inay had iyo jeer kugu dabaqi doonaan adiga adiga oo ku siinaya natiijo dabiici ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sida loo dheeho gadhkaaga